I-33 yamapolisa ifumana ifayile yaseYos Brech endala emva konyaka! : UMartin Vrijland
Kwakunokukhawuleza ukukhangela, ngokuqinisekileyo, kwaye kwakungekho msebenzi ongenakwenzeka, kodwa ngokukhawuleza kwakukho ifayile yakudala kaJos Brech, apho wayeya kwenza ukuxhaphazwa ngokwesini kunye namakhwenkwe angaphantsi. Lelo cala lahlehliswa ngokomqathango, kodwa oko akunandaba. UPeter R. de Vries akazange akwazi ukulungelelanisa lonke eli xesha kunye nabo bonke abathintana nabo ngaphakathi kwamapolisa ukuba le fowulda ifunyenwe ngasemva, kodwa ngokukhawuleza ikhona! Mkhulu! Imimangaliso ayisayi kuvela kwihlabathi, kwaye ayenzi ukuxhatshazwa ngabantu ngamapolisa nakwezobugwebi.
Ukongezelela, ukufunyanwa kwephephandaba kuye kwafunyanwa! Kwakhona kunjalo nje uphando olukhulu! Masiqale ngokukhawuleza malunga ne-Photoshop kunye nezinye iindlela. Oku kuphula nje!
Igama likaJose Brech alikhankanyi kwinqaku. Ngaba akucaci ngexesha likaJos Brech eliza kuba lilungu elikhethiweyo le-patsy elaliza kuncedisa ukutshintsha le PsyOp (ukusebenza kwengqondo)? Ibali liyakwenziwa ngamacala onke kwaye ngenxa yokugwetywa kwe-12 Disemba iza, sekusele ixesha lokuvuselela nokuqiniswa kwesigcawu.
Ukuba i-archives yamapolisa ukususela kwi-2014 yinxalenye ye inkqubo yokugcinwa kwedijithali asiyibambi nje kakuhle. Ukuba zonke ezi maxwebhu kufuneka zipapashwe nge-1 ukusesha ixesha elide, asixeli:
KwiSicwangciso soLwazi lweNgxelo ye-2014-2017, i-CDD + ikhethwe njengeziko eliqhelekileyo lokugcinwa nokugcinwa kwamaphepha kunye nobulungisa bezobugebengu kunye nabakhenkethi.
Ngoku kunjalo kunokuthi ingqalelo ukuba i-fayile yesiganeko yesiganeko isihogo somsebenzi, kodwa nakwixesha elidlulileyo leencwadi zokugcina unobhaliso kunye nedatha ngomhla kunye nezinye izikhombisi ezingabonakaliyo. Ukucinga nje ukuba ifayile iyatshatyalaliswa, kubonakala ngathi yangekho ngaphandle kwanikezelwa ngqalelo yonke imidiya ngo-Peter R. de Vries. Yenza ikati ibonise ukuba kufuneka wenze unyaka we-33 ukufumana ifayile leyo! Kulungile, iminyaka engamashumi amabini, kuba icala uNicky Verstappen lineminyaka engamashumi amabini ubudala. Ihlala iphawulekayo.
Oku kusekwahlukileyo kwimeko yokuba i-1985 inokuxothwa kwimeko efanelekileyo, kodwa ibonakala nje isebenza ekuncedeni ukuqinisa 'ilingo ngenkqubo yeendaba.'
Kubaluleke kakhulu ukuba uthathe i-28 Septemba 2018 kwinqaku kwakhona kuwe. Ukuba nawe uthatha ingxaki kuyo yonke ifayile Ukufunda, unokufumanisa ukuba sinokubambisana ne-PsyOp ebalulekileyo nemiphumo emihle.
Nangona kunjalo, uninzi lwabantu, luyolonwabo kakhulu ukuba luchukumise konke. Emva koko, asifuni ukuphazamiseka kwi-cocoon yethu yehlabathi evezwe ngamajelo. Oku kuyaqhelana kwaye asifuni ukuba ngabaqulunqa okanye inxalenye yenkqubo efanayo yokuhlaziya njengoko sibona e-US okanye e-UK ye Brexit (funda apha).
Uninzi lwamatyala okubulala ixesha elide eliye lafumana ingqwalasela enkulu kumaphephandaba ngoku ixazululwa ngegama lomlingo weDNA. Ewe, zixazululwa nge ityala ngeendaba nguPeter R. de Vries ukuba ahambe kwireksi yeendaba kwi-inkundla ethatha isivakalisi esidlangalaleni, ngaphandle kokukhusela ngokusemthethweni.
Kwakhona izigwebo ziphendukile Saskia Belleman tweet iimoto, apho kungekho mntu ukhangeleka ngokubaluleke kakhulu. Kwimeko ye-Nicky Verstappen yayiminyaka engaziwayo ukuba ingaba kubulawe, ukubulawa kwabantu, okanye ukuxhaphazwa ngokwesondo, kodwa ngokukhawuleza kwakukho umenzi wobubi ngaphambi kokuba kuphele ixesha lokunciphisa. Yonke imigaqo esemthethweni yaphulwa kweli bali, kodwa loo nto yayingathandanga, kuba imvakalelo yabantu yayidlalwe nguPeter R. de Vries kunye nomama okhulayo kaNicky. Osebenza ngokumangalisayo. Akukho mfuneko yokuba ngumbuzo weengcamango kwakhona. Usizi luphela luhlu lokuhlupheka.
Yintoni eyayingenangqiqo kule meko kukuba i-DNA evela kubantu abavela kumgca wesine nowesihlanu wasetyenziselwa ukulandelela uJos Brech. Ukuba oko kwaphumela kumdlalo kunye ne-DNA efunyenwe kwiingubo zikaNicky Verstappen, ngaba aba bantu babezityhola? Kwaye kutheni uJos Brech ukhetha ukuzinyameka kwimeko apho ukubulala, ukubulawa kwabantu, ukuxhaphazwa ngokwesondo? Kwakungadingeki ukuba, kuba kungekho nto. Ngenhlanhla, uMninimzi we-OM wePeter R. de Vries wagcina ixilongo lokuphambanisa kokugqibela: i-DNA kaJos Brech ngokukhawuleza yayingaphantsi kweengubo zikaNicky Verstappen. Kwakhona kukho konke ukukhahlela ukuthembeka. Ukuba inyaniso ayikho, unokwenza nje udaba olutsha emva kweminyaka eyi-20. Ukuba uluntu jikelele luqhubeka luba lukhuni, umane ubiza umnxeba we-pornography kwi-PC ye-(egwetyiweyo).
Ndathetha le nkqubo ngaphambi 'Ukwenza umbulali'kunye' noPeter R. de Vries ukuvavanywa ngamajelo '. Kwaye ukuba abantu bathi akukho bubufakazi bokubulala okanye ukuxhaphazwa ngokwesondo, utsho nje ukuba umzimba kaNicky wawuninzi kakhulu ukuqokelela ubungqina obuhle kwi-autopsy. Ukuba oku kuhambelana neziphumo ze-autopsy kwezinye iimeko zokubulala, akunandaba. Ku malunga nokudlala imvakalelo yakho kunye nokucwangcisa umfanekiso ofunwayo.
Kubonakala ngathi siye sidlala rhoqo kwiminyaka yamuva kunye nemiba ephambili apho i-DNA ibonakala iyisigqibo. Nangona i-logic yayingekho, i-DNA yayisoloko igama lomlingo. Kwimeko yaseMarianne Vaatstra, ubaba we-media circus uBauke Vaatstra wanikela umvuzo weMacavavelli, kodwa uNicolo Machiavelli (emva kwakhe umnikezelo ogama lakhe) wayenalo "nto yokwenza" ngobuqhetseba nokukhohlisa. Ukuba siye sadla ngokudlala kunye neengxaki ezinkulu ze-Psychop (Psychological Operations) ukukhuthaza ingcamango yokuba i-DNA yedatha ye-DNA ibaluleke kakhulu ukuxazulula amatyala okubulala, mhlawumbi sifanele sijonge ngokungakumbi malunga ne-database. Yintoni enokuyenza ngurhulumente?
Ukuqala, umqobo obalulekileyo wezomthetho ususwe kwi-Nicky Verstappen - Jos Brech. I-DNA kaJos Brech yayisetyenziswe kakubi kwelinye icala. Oko kukuthi: I-DNA kaJos Brech ithathwe kwimeko yokulahleka (i-propiti yayo), kodwa isetyenziswe kwimeko yeNicky Verstappen. Ummeli UGerald Roethof ubonisa ngokucacileyo ukuba ngummeli we-PsyOp apha, kuba ngenxa yeso sizathu wedwa wayenokumthabatha u-Jos Brech ngaphandle kwakhe. Okwangoku kungenakucingelwa ngokomthetho kwaye ngoko kungekho mthethweni ukwenza njalo. Wayenokwenza into enzima kakhulu apha, kodwa akazange akwenze. Umgca wezomthetho osele uhlaselwe ngenxa yesizathu (ekugqibeleni kwabantu) yiyo apho i-DNA ingakwazi ukufunyanwa kuphela kwi-database kwimeko nganye. I-case yeJos Brech sele isele ibe negalelo elikhulu kulo xesha i-database yesizwe izayo. Ubulungisa abukwazi kuphela ukusebenzisa i-DNA kwimeko echaphazelekayo, kodwa nakwezinye iimeko.
Ngoko apho yonke ingqalelo kwi-Pauw boniswa (bona apha) yashukunyiselwa kumabala amacilongo amabini omculo-hype,I-Jos's DNA yayisezigqweleni'kwaye'Iifoto zoonografi zifunyenwe'kunye noGerald Roethof behamba ngxubusho malunga nokuphazamiseka, kufuneka abeke ingqwalasela emthethweni ekusebenziseni i-DNA kwi-case (engekhoyo). Ukuba 'engekho' ndibeke phakathi, kuba (ndiyaphinda nje) akuzange kubekho icala lokubulala okanye ukubulawa kwabantu, okanye icala lokuxhaphazwa ngokwesondo. Naliphi na uhlobo lwenkxaso ebonisa ukuba le nto ilahlekile. Oko kukuthi: i-NFI ayizange ikwazi ukubonisa ukubulala, ukubulala okanye ukuxhaphazwa ngokwesini. Ngoko akukho nto. Akukho nto. Kukho i-DNA kuphela kwizinto ezingaphantsi, kodwa umdlalo kunye neDNA ifunyenwe ngokungekho mthethweni. UGerald Roethof wayenokufumana uJos Brech inkululeko. Kodwa ukuba kukho i-PsyOp ekukhuthazeni i-database yesizwe, awufuni ukuba umdlali we-patsy aphume kwikhowudi yakhe yokuvalelwa. Emva koko ufuna ukukhawuleza ukuthembeka kwebali ngokuzenza ngathi ugqwetha elilungileyo.
Ngenxa yoko ityala likaJos Brech linomsebenzi obaluleke kakhulu ngokomthetho. Akuzange nje kube negalelo - nje nge-Vaatstra icala - kwingcamango yokuba i-DNA iyigama lemilingo kwaye ngoko ke kufuneka sithuthumele ngokukhawuleza kwi-database yesizwe. Okubaluleke ngakumbi, uGerald Roethof unembopheleleko yokuqinisekisa ukuba akukho zichaso ezenziwe ukusetyenziswa kwale DNA eqokelelwe kwenye imeko. Ngamafutshane: xa sele ufumana i-DNA yakho, urhulumente uzakukwazi ukuyisebenzisa nantoni na! Capiche? I-Handy!
Ukuba urhulumente ngokukhawuleza uza kuba neprofayili ye-DNA yomntu ngamnye kunye nokugonywa kunceda ukubonelela nge-nano-bots kuwo wonke umntu we-CRISPR, ngaba unokucinga ukuba yiziphi iimeko ze-android zokuguqulwa ezi zinto? Okanye ngaba awuqapheli le sigama? Urhulumente ucinga ngamanyathelo e-10 ngaphambili. Nawe?
Ngomthetho wokunikezelwa komzimba, urhulumente uye waba ngumnini womthetho womzimba wakho. Ngoko ke kuvunyelwe kwakhona ukwenza ukulungiswa kuyo. UGerald Roethof uthathe umyinge ukuba avunyelwe ukusebenzisa i-DNA yakho apha (esikhundleni sophando olusemthethweni olwenziwe yi-DNA).
Uludwe lwekhonkco lovimba: telegraaf.nl, justid.nl
tags: 1984, 1985, irekhodi, eziziimbalasane, fu maneka, Jos Brech, kwabantwana, UNicky Verstappen, henyuzo, ubudala, ityala ngeendaba, u krokrela, gwetywanga
« I-Google isusa iziphumo zophando Jos Brech - uNicky Verstappen odibene noMartin Vrijland
I-Block iFrisians, i-anti-piet activists kunye nomdlalo wezopolitiko »
Utyelelo lulonke: 4.257.930